ကြက်သား ထမင်း | Wutyee Food House
September 30, 2010 by chowutyee
ဒီကြက်သား ထမင်းက ထိုင်းအစားအသောက် တစ်မျိုးပါ။ ခုတစ်လောက် ထိုင်းဟင်းတွေ ဓာတ်စာကျနေတာမို့ ချက်စားဖြစ်သွားတာပါ။ အရသာရော ပုံစံကရော ဒန်ပေါက်လိုလို၊ ထောပတ်ထမင်းလိုလို တော်တော်လေးကို ဆင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ထူးခြားမူက ထောပတ် ထမင်းလို လုံးဝမအီပဲ အရမ်းလည်း စားလို့ ကောင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်စားရလည်း လွယ်ကူပြီ ဆွမ်းကျွေး၊ အလှူပွဲတွေမှာလည်း လုပ်စားနိုင်တာမို့ ချက်နည်းလေးပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
၁။ ကြက်သား – ၂၅ကျပ်သား (ရေဆေးပြီ အတုံးကြီးများတုံးပါ)
၂။ ထမင်း (မချက်ရသေး) – ဆန်ချိန်ခွက် ၂ခွက်
၃။ ကြက်သွန်နီ – ၃လုံး (ပါးပါးလှီးပါ)
၄။ နို့ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၅။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၆။ ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ ကြက်သားမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၂။ ဆနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၃။ နံနံမှုန့် (coriander powder) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၄။ ဇီယာမှုန့် (cumin powder) – လကဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၆။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ရ။ သစ်ဂျပိုး (cinnamon) – ၂ခု
၈။ ကလဝေရွက် (Bay Leave) – ၂ရွက်
၁။ ပါဝင်သောဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တ၀က် ဆီကို ခွဲ၍ ပန်းကန်လုံး နှစ်ခုထဲသို့ ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ထို့နောက် ကြက်သားတုံးများကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တ၀က်( ကြက်သားမှုန့်ဲ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ ဆနွင်းမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ နံနံမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဇီယာမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ သစ်ဂျပိုး(၁ခု)၊ ကလဝေရွက်(၁ရွက်)) တို့ဖြင့် ဇလုံ တစ်ခုထဲတွင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးမှ ရောနယ်ထားသော ဇလုံထဲသို့ နို့(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း)ကို ထည့်လိုက်ပြီ ၁နာရီကြာအောင် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်၍ နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ကြက်သားနုပ်ထားပြီလျှင် ဒယ်ထဲကို ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ထောပတ်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်ပြီ ကြက်သွန်နီ တ၀က်ကို ဒယ်ထဲ ထည့်၍ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ ပြီးလျှင် နုပ်ထားသော ကြက်သားများကိုပါ ဒယ်ထဲထည့်မွှေလိုက်ပါ။
၆။ ကြက်သားကို အရောင်ရရန် ဆီပူ ထိုးပေးပါ။ ပြီးမှ ကြက်သားနူးရန် ရေ(ဆန်ချိန်ခွက် တခွက်) ခန့်ထည့််ပြီ မီးနည်းနည်းဖြင့် အဖုံးအုပ်ထားပေးပါ။
ရ။ ကြက်သားနူးပြီဆိုလျှင် ရေခန်း၍ ပန်းကန်တစ်ခုထဲ ဖယ်ထားပေးပါ။
၈။ ဆန်ကို စချက်ပါမည်။ ဒယ်ထဲသို့ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ထောပတ်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်လိုက်ပါ။
၉။ ပြီးလျှင်ကျန်သော ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တ၀က် ( ကြက်သားမှုန့်ဲ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ ဆနွင်းမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ နံနံမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဇီယာမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)၊ သစ်ဂျပိုး(၁ခု)၊ ကလဝေရွက်(၁ရွက်)) ကို ဒယ်ထဲထည့်လိုက်ပြီ ဆန်များပါ ထည့်၍ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၁၀။ ၁မိနစ်လောက် မွှေပြီလျှင် ဆန်ချက်ရန် ထမင်းအိုးထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။
၁၁။ ထို့နောက် ချက်ထားသော ကြက်သားများကို ထမင်းအိုးထဲသို့ အပေါ်မှ ထည့်လိုက်ပါ။
၁၂။ ပြီလျှင် ထမင်းချက်သည့် အတိုင်းပင် ဆန်၂လုံး အတွက် ရေ(ဆန်ချိန်ခွက် ၃ခွက်) လောင်းထည့်လိုက်ပါ။
၁၃။ ထို့နောက် ထမင်းချက်သည့်အတိုင်း ချက်လိုက်ပါ။
၁၄။ ယခု အရသာရော အနံ့ရော အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ကြက်သားထမင်းကို ရရှိပါပြီ။ ထမင်းနှင့် ကြက်သားပေါ်သို့ ကြက်သွန်ကြော်လေးများ ဖြူးပြီ အရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 23 Comments
on September 30, 2010 at 10:55 am | Reply kaykhine
အရမ်းစားကောင်းမယ့် ပုံပဲနော်…ချက်စားကြည့် မယ်….
on September 30, 2010 at 10:58 am | Reply kaykhine
နံနံမှုန့် နဲ့ ဇီယာမှုန့် တို့ ကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ အစ်မ..City mart မှာလား ?
on September 30, 2010 at 11:00 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် ကေခိုင်.. City Mart မှာဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တန်းမှာ အားလုံး ရှိတယ်… လုပ်စားကြည့် တကယ်စားကောင်းတယ်.. 🙂
on September 30, 2010 at 11:13 am | Reply kaykhine
on September 30, 2010 at 12:07 pm | Reply hmone
sar taugh sar chin lar pe naw hee 😉
on September 30, 2010 at 1:54 pm | Reply chowutyee
မှုံကြီး ကိုယ်လုပ်စားကြည့်ပါ့လား… ဆွမ်းကပ်ရင်လည်း အဆင်ပြေတယ်.. 😛
on September 30, 2010 at 4:43 pm | Reply Kay Kay
ကြည့်ရင်းနဲ့ တောင် သားရေကျလာပြီ..
on October 1, 2010 at 6:23 am | Reply chowutyee
ကေကေရေ.. ဇီယာမှုန့် ရှာမရရင် ဇီယာကိုထောင်း ထည့်ရင်းလည်း ရပါတယ်။ ဇီယာ(သို့) ဇီယာမှုန့်ကို Citymart မှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ရောင်းတဲ့ အတန်းမှာ ၀ယ်လို့ ရပါတယ်… လုပ်စားကြည့်နော်… 😛
on October 1, 2010 at 6:38 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
တကယ်ကို စား ချင်စဖွယ်ပါကွယ်
ဒီနည်းလေးတော့ လွယ်တယ် လုပ်စားဦးမယ်
on October 2, 2010 at 6:11 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် မချော ဒန်ပေါက်နဲ့ တော်တော်ဆင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရသာကတော့ ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ပိုတူပြန်ရော… လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
on October 17, 2010 at 1:20 am | Reply သင်းသင်းရည်
ညီမချက်စားပြီးပြီ အရမ်းကောင်းတာဘဲနော် မမ။ ကျေးဇူးတင်တယ်။
on October 17, 2010 at 4:09 am | Reply chowutyee
Thanks to you sis! 🙂
on April 22, 2011 at 12:37 pm | Reply Ant
Sis, I cooked today. We enjoy it. Thanks.
on April 27, 2011 at 2:03 pm | Reply chowutyee
Really!! Thanks you too
on March 5, 2012 at 12:10 pm | Reply အောင်ကိုကိုဦး
on March 7, 2012 at 3:51 pm | Reply chowutyee
CityMart မှာလည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ်.. ပြီတော့ ဈေး ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ ရပါတယ်..
on April 22, 2012 at 2:01 am | Reply Htinlin Zaw
on April 23, 2012 at 4:13 pm | Reply chowutyee
ဆန်အရင် ရေဆေးပြီမှ ချက်ရတာပါ.. 🙂
on April 26, 2012 at 5:21 pm Htinlin Zaw
on April 28, 2012 at 7:40 am chowutyee
မရေ ၁ကျပ်သား = ၁၆ ဂရမ်ပါ
on April 27, 2012 at 7:05 am | Reply Ah Ngai
how to made ‘mandalay pae kyaw ‘ ?
on April 29, 2012 at 1:26 am | Reply Htinlin Zaw
on May 2, 2012 at 10:51 am | Reply chowutyee